Africa (teknụzụ ndị Africa) | KONGOLISOLO
Aha ochie nke Afrịka bụ "Alkebulan", nke pụtara "Nne nke mmadụ ma ọ bụ Ogige Ubi", anyị niile maara na Afrịka bụ akwa nke mmadụ, mana ị maara nke ahụ n'eziokwu ọ bụ ngọngọ nke ndụ? … (VIDEO)
Site na: KongoLisolona: July 12, 2020 08: 08 Enweghị asịsa
Africa bụ naanị kọntinenti nọ na mbara ala ijikọ 9 biomes naanị! Nke ahụ bụ ịsị usoro 9 Eco! Aha a bu Africa bu ihe itunanya, ebe obibi otu puku mmadu na nari ano…	GỤKWUO
Agbụrụ agbụrụ Dogon: ndị kacha nwee ọgụgụ isi na ụwa “Ndị Dogon egosiwo na ha bụ ndị nwere onyinye na mmụọ nsọ na ịgụ kpakpando na ịgụ kpakpando; ndị na-enyocha mbara igwe ụwa anabatawokwa ya ”
Site na: KongoLisolona: June 11, 2020 11: 11 Enweghị asịsa
Worldwa niile kwenyere na nke a. Emewokwa ka o doo anya na ndị ọkachamara NASA na-agakwuru ndị na-enyocha mbara igwe nke Dogon. Ka ndị ojii / ndị Africa gharazie mehie, maka na ọ…	GỤKWUO